I-Cottage ebukekayo "I-Snug" - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Serena
U-Serena Ungumbungazi ovelele
I-cottage ebukekayo equkethwe ngokugcwele endaweni efihliwe, imizuzu kusuka epaki elithandwa kakhulu lamanzi e-Victoria kanye ne-5 km kusuka e-Ocean Grove/Barwon Heads amabhishi. Ikufanelekele i-Queenscliff kanye nemidwebo yewayini ezungezile. I-heater yezinkuni, i-air conditioner, ikhishi eligcwele kanye nelineni yonke inikeziwe. Imoto emfushane esuka esangweni eya e-The Great Ocean Road. Phumula futhi ukhokhise amabhethri!
Futhi ungaletha inja yakho ukuzulazula engadini ebiyelwe ngokugcwele futhi uhlangane noPaddy noRuby!
I-Snug isendaweni efihlekile engadini enkulu ye-3 acre. Kuzungezwe yizihlahla ungangcebeleka esihlalweni se-squatters ku-verandah. Indawo ephelele ukujabulela Victoria ngobukhulu amanzi indikimba epaki, 'Adventure Park" ( 2 imiz drive) kanye entsha cutting onqenqemeni wezakhiwo yakhelwe Flying Brick Cidery okwenza umklomelo yayo siqu ngokuwina cider on indawo. Inqwaba yewayini iphakathi kwemizuzu engu-20 ukushayela, kanye namabhishi okutshuza amaminithi ambalwa. Amathilomu amangalisayo nezindawo zokudlela ziseduze futhi amaminithi angu-30 ahamba ngesikebhe saseQueensciff-Sorrento. Kulungele uhambo lasemini oluya kolunye uhlangothi! Indlu yethu iseduze ngamahektare afanayo angu-3 kodwa uhlukile futhi uzimele.
I-Wallington ihlukile ngoba ingamaminithi angu-20 ukusuka e-Geelong, amaminithi angu-80 ukusuka e-Melbourne, nemizuzu engu-80 ukusuka kwamanye amabhishi amahle kakhulu e-Victoria. I-Wallington izungezwe izindawo zokudlela eziwina umklomelo, izindawo zokudlela, indlu ye-cider, kanye nepaki elikhulu lamanzi lase-Victoria, i-Adventure Park.
Ngeke sikufake engozini ekuhlaleni kwakho kodwa sizoba lapha ukuze sikusize nganoma iyiphi indlela. Izinkuni eziningi? Akukho ukukhathazeka? Imininingwane yezindawo zokudlela nama-wineries, singasikisela ukuthi yiziphi ezingase zifanelane kangcono nalokho okufunayo.
Ngeke sikufake engozini ekuhlaleni kwakho kodwa sizoba lapha ukuze sikusize nganoma iyiphi indlela. Izinkuni eziningi? Akukho ukukhathazeka? Imininingwane yezindawo zokudlela nama…